Dhibane Covid-19 qaba oo loo diiday fasax, kuna aaday Shaqada Oxygen. | HimiloNetwork
Posted by: Himilo in La-yaabka June 27, 2021	0 80 Views
MUQDISHO (HN) — Shaqaale bangi oo ku yaal Hindiya, kana soo kabanayay cudurka coronavirus ee dhibaato ku haya dalkiisa, ayaa la sheegay in loo diiday fasax isla markaana lagu qasbay inuu u yimaado shaqada isagoo ku xirnaa haanta oksijiinta.
Arvind Kumar wuxuu maareeye ka yahay laanta Bokaro ee Bangiga Qaranka ee Punjab, oo ku taal gobolka Jharkhand, wuxuu goor dhaweyd ka soo muuqday goobtiisa shaqada isagoo wajiga maaskaro oksijiin dul saaran oo jiidaya tuubada oksijiinta.
Muuqaal fiidiyow ah oo tan iyo markii uu faafay ninka da’da dhexe ayaa laga maqlayaa isagoo dhahaya waxaa loo diiday fasax ay u direen dadka waayeelka ah, marka waa inuu yimaadaa shaqada, inkasta oo uu weli ka soo kabanayo xaalad naftiisa halis ku jirtay. Fiidiyowga Kumar oo ku tiirsan xaaskiisa iyo wiilkiisa oo jiidaya tuubada oksijiinta ayaa wareegay internetka muddo toddobaad ka badan, taasoo dhalisay muran ka dhashay baraha bulshada.
Dhakhaatiirtu waxay yiraahdeen waxay igu qaadan doontaa seddex bilood in si buuxda aan u soo kabsado maxaa yeelay infekshanku wuxuu ku faafay sambabahaaga. Maxaa laygu dhibaateeyaa? ” Arvind Kumar ayaa lagu soo waramayaa inuu u sheegay Live Hindustan.
Dhacdadan yaabka leh ayaa la sheegay inay ka dhacday, qeybta Sector 4 Punjab National Bank ee Bokaro.
bangiga Hindiya wuxuu la tacaalayay mowjad cambaareyn iyo caro ah xilli aad u xasaasi ah, maaddaama cudurka faafa ee Covid-19 uu ku sii socdo India. Si kastaba ha noqotee, hay’adda maaliyaddu waxay si dhakhso leh ugu dhaqaaqday weerar-celin, iyagoo ku eedeeyay Kumar inuu abaabulayo wax walba.
Sida laga soo xigtay war-saxaafadeed ay soo saartay PNB Bokaro Circle Office, Arvind Kumar wuxuu sameeyay riwaayad dhan si uu u bahdilo saraakiisha bangiga iyo sidoo kale bangiga. Sida muuqata, shaqaaluhu wuxuu gudbiyay iscasilaadiisa laakiin waa la diiday maadaama baaritaan waaxeed ay ku socoto isaga, oo ku saabsan amaahda hantida aan fulin (NPA).
“Waa qalad in laga dhaadhiciyo in madaxdiisu ka codsadeen inuu soo xaadiro waajibaadkiisa inkasta oo uu yahay bukaan ka soo kabanaya COVID. Fasaxa mushaharka ah waxaa la siiyaa dhammaan shaqaalaha u qalma ee qaata fayraska iyadoo la daneynayo shaqaalaha sida iyo sidoo kale kuwa kale ee halista ku jira. Sidaa darteed waa wax aan sal iyo raad lahayn in la soo jeediyo in lagu qasbay inuu soo xaadiro waajibaadkiisa, ”ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka.
Live Hindustan ayaa soo warisay in qoyska Kumar ay ku adkeysteen in bangiga uu ugu hanjabay in mushaarkiisa laga jarayo haddii uusan shaqada imaan, taas oo ku qasabtay inuu muujiyo taageerada oksijiinta, laakiin waxba kama aysan sheegin baaritaanka ku saabsan howlihiisa bangiga.
Previous: 26-ka June – Maalintii koowaad ee Madax-bannaanida Somaaliweyntii lagu hungoobay!
Next: Maalinta Caalamiga ee Ganacsiyada yaryar iyo Kuwa Meel-dhexaadka.